Mandoto ny lazan’i Japana amin’ny fihazana trozona i Neo Zealandy, hoy ny haino aman-jerim-panjakana Japoney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jona 2019 3:41 GMT
Ny 19 septambra, nankatoavin'ny Vaomiera Iraisampirenena momba ny fizahana trozona (IWC amin'ny teny Anglisy) nandritra ny fivoriana tao Slovenia ny tolo-kevitr'i Neo Zealandy amin'ny fanamafisana ireo fitsipika “fihazana trozona ara-tsiantifika”. Nandany fanapahan-kevitra hanohana ny didim-pitsaran'ny Fitsarana Iraisam-pirenena vao haingana ny IWC fa tsy ara-dalàna ny fihazana trozona ara-tsiantifika ataon'i Japana any Antarctika ka tsy tokony omena fahazoan-dalana fikarohana momba ny trozona intsony raha tsy misy porofo amin'ny filàna ara-tsiantifika.
Nilaza ny fikasany hanangana drafitra fikarohana vaovao i Japana ary hanohy hamono trozona amin'ny anaran'ny siansa. Noho ny tolo-kevitr'i Neo Zealandy, dia lasa sarotra ho an'i Japana ny ho tonga amin'ny programa siantifika azo ekena eo amin'ny vaomiera.
Noraràn'ny “International Whaling Commission” ny fihazana trozona amin'ny tanjona ara-barotra tamin'ny taona 1986. Na dia izany aza, nilaza hatrany ny tsikera ivelan'i Japana fa nampiasaina ho hafetsena mba hanohizana ny fihazana trozona ho amin'ny tanjona ara-barotra ny fiavahana amin'ny fizahana trozona ara-tsiantifika.
Toa nampahatezitra ny fahefana eo an-toerana ao Japana ny fanentanana mahomby nataon'i Neo Zealandy mba hahatonga ny “fihazana trozona ara-tsiantifika” ho sarotra tanterahana. Mpisera Twitter, @unorthodox_TW nandefa sary nalaina tamin'ny fanadihadiana tamin'ny fandaharan'ny News Watch 9 tao amin'ny NHK mikasika ny fanapahan-kevitry ny IWC tamin'ny herinandro lasa.
Ny fanadihadihan'ny New Watch 9 dia natao taorian'ny fanentanan'ny governemanta izay mikendry ny hiantohana ny NHK, izay fampielezam-peom-panjakana tsy mitanila tany am-boalohany, ary ankehitriny lasa mampiroborobo ny fomba fijerin'ny fanjakana amin'ny resaka ara-politika.
Niditra Twitter i Corey Wallace, Neo-Zealandey iray mpaneho hevitra malaza amin'ny raharaha ara-piarovana aziatika avaratra atsinanana, izay niresaka momba an'i Shina, Japana ary Azia Atsinanana tao amin'ny Oniversiten'i Auckland mba hiantso ny fanadihadian'ny NHK ho ” fanahin-jaza tanteraka sy fanahy iniana tsy ho azo itokisana.”
Tao amin'ny Togettor, mpanangom-botoaty Twitter izao samonta izao tamin'ny voalohany, izay nanamarika hoe:
Na dia lazaina ho ‘fihazana trozona ara-tsiantifika’ aza, dia tsy izany no tena antony, mihaza trozona i Japana satria te hihinana izany ianareo? Fa maninona moa raha miresaka momba azy io? “, hoy ny fiarahamonina iraisam-pirenena. Raha nanohitra imbetsaka teo anoloan'ny fitsarana iraisam-pirenena i Japana fa mikatsaka fandaharanasa momba ny fihazana trozona ara-tsiantifika, ny zava-misy dia manolotra henan-trozona misy carry ho an'ireo mpanao politika ao amin'ny firenena ny kafetarian'ny Diet [antenimiera japoney].
Ho an'ireo izay maniry ny hanaraka ny lohahevitra fihazana trozona, anisan'izany ny fiantraikan'ny latsa-baton'ny IWC farany, toerana tsara hanombohana ny Bilaogy Kujira Clipping (Japoney).